Magic Piano avy amin'i Smule, fomba mahafinaritra hitendry piano | Vaovao IPhone
Ny filalaovana piano miaraka amina valiny saika maha-matihanina azy dia azon'ny tsirairay atolotra noho i Smule sy ny Magic Piano. Ity lalao mahafinaritra sy mampiankin-doha ity dia mametraka ny feon'ny pianô sy zavamaneno hafa mitovy amin'ny iPhone sy iPad anao hahafahana miterakar manomboka amin'ny symphonies Beethoven kilasika ka hatramin'ny farany Maroon 5 malaza. Mety ho an'ny olon-dehibe sy ankizy, lalao maimaim-poana sy tena atolotray izy ity izay miovaova ny haavon'ny fahasarotana arakaraka ny fahaizanao ary sarotra ny mametra ny fividianana.
Magic Piano dia manolotra ambaratonga maro pitsiny. Amin'ny lafiny iray, ny fifangaroana nofidinao: "Ho an'i Elisa" na "Estrellita, aiza ianao" dia feon-kira izay kely indrindra ny fahasarotany, fa raha misafidy Moves Toy ny Jagger isika dia ho sarotra kokoa izany. Ary koa, ao anatin'ny hira tsirairay izay safidintsika ho lalaovina dia misy ambaratongam-pitsiny telo samihafa. Avy amin'ny gadona izay rantsan-tànana iray na roa ihany no ampiasainao amin'ny hafa izay mifangaro haingana sy mitohy ny fitambaran'ny rantsan-tànana 3 sy 4, mitaky fahaiza-manao lehibe sy reflexes haingana hahazoana ny vokatra akaiky ny tany am-boalohany.
Ao amin'ny horonan-tsary dia hitantsika ny halaviran'ny fitendrenao ny piano ao amin'ny Magic Piano, saingy mbola lavitra ny lalana mankany. Ny fahasarotan'ilay lalao dia tena mandroso ary tsy mieritreritra mihitsy ianao hoe ny gadona manaraka tokony lalaovinao dia tsy azo tanterahina satria kely ny fiankinan'ny Magic Piano. Lalao tena natokana ho an'ny fianakaviana iray manontolo, izay mitondra mozika isan-karazany ho an'ny ankizy ary izany dia hahatonga azy ireo hanandrana ny atao hoe fitendrena zavamaneno, iza no mahalala raha hiafara amin'ny filalaovana mozika iray rehefa mandeha ny fotoana. Maimaimpoana sy manerantany ny fampiharana, ary koa multiplatform.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPad » Magic Piano avy amin'i Smule, fomba mahafinaritra hitendry piano
AlphaBetty Saga, ny lalao vaovao avy amin'ireo mpamorona ny Candy Crush